Best wineries Na Europe na otú Nweta E | Save A Train
Home > Travel Europe > Best wineries Na Europe na otú Nweta E
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 11/04/2021)
eleta wine n'ógbè ke Europe bụ a nrọ ọ bụla wine connoisseur. Stunningly enwekwa ubi vaịn, ekpo ọkụ na-anwụ na-acha ihu igwe, enchanting obot, na ezigbo nri kọwaa ndị a n'elu wine na mpaghara. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ mmanya n'anya ma chọọ ịhụ Wineries Kasị Mma Na Europe Na Otu Esi enweta E, Save A Train ga-enyere gị ga-esi n'ebe ahụ!
Gụọ na ịmata ihe Europe nwere na-enye wine ndị hụrụ. Anyị na-eche na ị gaara etinye ya na uche gị tupu ị gwụchaa edemede a!
Best wineries na Europe: France
Ụfọdụ n'ime ndị kasị ama na Best wineries na Europe na-hụrụ na Champagne. Ọ bụ ihe na ezigbo ebe maka a ụbọchị njem site Paris, ma e nwere ọtụtụ Champagne ụlọ inyocha ma Reims na Epernay, ebe ị ga-ahụ prestigious aha dị ka Veuve Clicquot na Tattinger. The Champagne region ndondo aha ya bụ a UNESCO World Heritage saịtị, nke bụ ihe kacha Olee maka njem na ebe, tinyere ọmarịcha Rolling obot full ubi vaịn.
The Rhône Valley wine mpaghara nwere ọtụtụ ihe na-enye site na a na omenala ka esiri hụ na Lyon ịbụ otu n'ime ndị UNESCO World Heritage Sites. Na ya mfe, authentic gastronomy, The Rhône bụ a wine n'anya si heaven na ama mmanya nke Crozes-hermitage, Cote-Rotie, na Chateauneuf-du-Pape na-ese ndị njem nleta mmanya si gburugburu ụwa.
Echela ụjọ ma ọ bụrụ na ị na-dị nnọọ na-achọ ezi oge na ụfọdụ buddies ezie! Site beginners ka ndị ọkachamara, na Rhône bụ n'ezie otu ịgbakwunye na ndepụta. Ebe a bụ a rundown of ebe na-aga na ihe ịhụ.
Lyon ka Provence site na Ọzụzụ
Best wineries na Europe: Tuscany, Italy
The Tuscany wineries enye ndị zuru okè wine obodo ahụmahụ. Ọbụghị naanị Tuscany nwere ụfọdụ ’Stali ụdị ama ama, dị ka ndị ọhụrụ Val d'Orcia DOC, Vino Nobile di Montepulciano, ma mpaghara ahụ jupụtakwara nganga, ịhụnanya nke ala, na nnukwu ọṅụ nke ịkụziri ya ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị ga kama bụghị na-eme atụmatụ na gị onwe gị Tuscany wine tour, you can rely on the expertise of a guide or driver. We usually ịgbazite ụgbọ ala na-eme ya onwe anyị, ma anyị mere nwere a onwe ọkwọ ụgbọala na Montalcino bụ ndị kpọọrọ anyị gburugburu ka anyị tupu zubere stop. Ọ bụ oké ụzọ na-aga ma ọ bụrụ na you`re nchegbu banyere ụgbọala na ebe ma ọ bụ chọrọ ịṅụ mmanya kama ọ gbụpụsịrị ọnụ mmiri ya.
Ị nwere ike n'akwụkwọ a tour tupu. Anyị na-eche na ọ bụ ihe kacha mma na-aga na a onwe tour, dị ka nke a Montepulciano tour, Montalcino tour, ma ọ bụ Chianti tour si Viator.
NDỤMỌDỤ: Anyị na-ukwuu na-atụ aro na-agbakwunye a winery nri ehihie ka atụmatụ gị ụbọchị ọ bụla. Tuscan mmanya na-pụtara na a ga-enwe mmasị na nri.
Best wineries na Europe: Mosel, Germany
Anyị niile maara Germany n'ihi na ya biya na ụgbọala, ma ruo ugbu a, we didn’t know that they have a kick-ass wine region too.
n'agbata Koblenz na ókè-ala na Luxembourg ina Germany kasị ochie wine region. ugbua, ndị Rom hụrụ nwere na-ekpo ọkụ Micro-ihu igwe na potassium-ọgaranya ala. taa, the vineyards of the Moselle region produce some of the world’s best Rieslings.
E nwere nnọọ ole na ole ịhọrọ site na, ma na n'elu ndepụta anyị bụ Weingut Willi Schaer. A obere ubi-vine na ụbọchị laghachi 1121. The Schafer ezinụlọ ukwuu n'ime na-adabere ná ha a zụrụ nke uche nke uto na ha gootu mmuo mgbe ọ na-abịa na-ekpebi oge kacha mma ubi nkebi nke ọ bụla nke osisi vaịn ha. Nke anyị na-eche bụ badass!
The ezinụlọ nanị na-arụpụta Riesling na ha 4.2 hectare ala nke na-ji a zuru okè itule n'etiti acidity na Ọdịdị. A na-ekesa mmanya ndị a ma ama n'ụwa niile. Ọ bụrụ na ị ga-achọ nụrụ ụtọ na wine na-na saịtị, ijide n'aka ka akwụkwọ na otu oge atọrọ tupu.
Best wineries na Europe: Lavaux, Switzerland
ihe kwesịrị ncheta viticulture: Ọ bụ a okwu na-arụrụ ọrụ na-akọwa ugbo nke siri ike Okirikiri. Lavaux, Switzerland is a region that exemplifies the concept perfectly.
Lavaux bụ a mmanya sub-region of Vaud, nsogbu na ugwu nke ụsọ Lake Geneva, Switzerland. Nke a na ebe, nke enyene ihe enviable ọnọdụ na n'ebe ọwụwa anyanwụ ọkara nke ọdọ, mara maka amị steely ọcha mmanya, tumadi si Chasselas grape.
The oge mbụ gị anya ganāwagide ya nkpoda mpụga, ị na-gburu site na impracticality ya niile. (Karịsịa biputere a ole na ole karama mmanya). ghọtara site UNESCO ka a World Heritage Site, akụkụ a nke a gọziri agọzi nke Ọdọ Mmiri Geneva na-eme ka akụkọ ifo nke mbara ihu jupụtara na ifuru, akachia-acha anụnụ anụnụ mmiri na ike na-zuo okè n'ihu na a iko obodo Chasselas. N'otu aka ahụ, ya ọdọ-amakụ akpa nkata-enwekwa ọṅụ na oké slants that only a mountain goat and team should harvest.
N'oge narị afọ nke 11, ndị a buru ibu n'akụkụ ugwu bụ Benedictine na Cistercian ebe obibi. Ọ bụ ndị mọnk bụ ndị akanamde n'oge gara n'ọhịa ebe n'ime arụpụta ubi vaịn na-eme nwere Ibulite vistas.
Nke a bụ n'anya nke ụgbọ okporo ígwè window na obibia Lausanne:
The obodo nke Lausanne bụ n'ụzọ zuru okè na nsogbu na otu njedebe nke Lavaux. Ọ na-eme ka ihe dị mma ugbua ịgagharị n'ógbè. n'ime Switzerland, Lausanne bụ n'ezie ọtụtụ nwe mgbe ọ na-abịa n'ubi vaịn. (Obodo a nwere mpaghara mmanya na-eto eto nke pere mpe 62 football ubi, amị ruo 400’000 karama kwa afo.)
Back gị na akpa na-ana gị iko. Ọ bụ oge enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ abụọ na-ele ndị Best Wineries na Europe. Save A Train ga-enye gị tiketi ọsọsọ na nke na-enweghị nsogbu na enweghị ụgwọ zoro ezo. Gịnị ka ị na-eche? Oge na-esi gị wine, on!
Ị chọrọ Embed anyị blog post Best wineries Na Europe na otú Nweta E jidesie gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#EuropeWine #TrainandWine #wineries #winetasting #winetastinginEurope europetravel mmanya winetour